Mpandraharaha karana mpanafatra vary Maro ireo tsy manana taratasy ara-dalàna hipetraka eto Madagasikara
Mbola mitana ny sain’ny maro ny mikasika ireo teratany “Karana” vahiny manao fandraharahana ara-bary eto Toamasina,
Tsena mialoha ny fety Zara raha mahalafo entana ny mpivarotra
Herinandro mahery eo ho eo sisa dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Krismasy isika, fety iray anisan’ny manan-danja tokoa ho an’ny isan-tokantrano.
Raha ny fanadihadiana natao tamina mpambongady eny Anosibe dia nilaza izy ireo fa hatrany am-potony mihitsy no mampiakatra ny vidim-bary fa tsy miankina amin’izy ireo. Nambarany ihany koa fa miakatra hatrany ny vidim-bary rehefa fotoana tahaka izao satria any am-panetsana avokoa ny tantsaha mpamokatra ka vitsy ny vokatra miakatra. Mahavariana ihany ny fiakaran’ny vidim-bary eny Anosibe. Tsy nisy intsony rahateo ny mpanara-maso taorian’ny nandalovan’ny Mminisitry ny varotra teny an-toerana. Ho an’ireo tratra nanangom-bary tao amin’ny toeram-pivarotany moa ary mampiakatra ny vidiny tsy miato dia tsy nisy ny fanakatonana na ny fepetra noraisina manokana momba azy ireny hany ka mahatsiaro ho mijaly ny madinika. Tsiahivina fa efa tafakatra 2.040 Ar ny iray kilao amin’ny vary makalioka fotsy amin’izao eny an-tsena, 1940 Ar ny makalioka mavo, 1960 ny vary gasy fotsy, 1860 Ar ny vary gasy mavokely, 1950 ny vary gasy mena, 2000 Ar ny varin’i Manalalondo raha 1820 Ar ny vary tsipala. Ho an’ireo mpivarotra atsinjarany manokana dia efa tafakatra 450 Ar ny iray kapoaka amin’ny vary tsara eny an-tsena raha 380 Ar ny mora indrindra.